ကတ်ထူပြားနှင့်အတူလက်မှုပညာ - လက်မှုပညာတွင် | လက်မှုပညာစာမျက်နှာ (စာမျက်နှာ ၂)
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ခေတ်လက်မှု၌ငါတို့သည်ပင်လယ်ဓားပြကစားရန် spyglass တစ်ခုပြုလုပ်ပုံကိုကြည့်မည်။
သင်လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးအလွန်မူရင်းစက္ကူလိပ်များဖြင့်လက်မှုပညာရှာနေပါသလား။ မင်းကိုအံ့သြစေမယ့်ဒီစိတ်ကူး ၂၀ ကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။
သစ်သားတုတ်များဖြင့်ပျော်စရာကောင်းပြီးမူရင်းတိရစ္ဆာန်များမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပုံကိုရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြက်၊ ငါးနှင့်ဒိုင်နိုဆောတို့ကိုပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့သည်။
ကြက်ဥပုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပုံ ၇ ပုံ
ပူပြင်းသည့်အချိန်များတွင်လုပ်ရန်ကတ်ထူပြား ၇ ခု
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ကနေ့သင်ကတ်ထူပြားဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ပုံစိတ်ကူး (၇) ခုယူဆောင်လာသည်။
အိမ်သာစက္ကူလိပ်များနှင့်အတူတံဆိပ်ခေါင်းဖို့ဂျီ ometric မေတြီပုံစံများ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်ယာဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျီ ometric မေတြီပုံစံများကိုတံဆိပ်ခေါင်းယူရန်သွားသည်။ ဒါဟာသွားတဲ့ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ကြောင်အဘို့ကစားစရာနှင့်အတူ box ကို
ဒီအနုပညာကသင့် kitty အတွက်ပျော်စရာကစားစရာတွေနဲ့ကတ်ထူပြားတစ်ချောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြတယ်။ သင်သည်သင်၏ကစားareaရိယာကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကတ်ထူပြွန်ကြီးတစ်လုံးဖြင့်မိုးရွာအောင်ပြုလုပ်ရန်၎င်း၏ပုံသဏ္recreာန်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုလွယ်ကူ။ လွယ်ကူသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုကတ်ထူပြားထဲမှငါးအချို့ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ကတ်ထူပြားအနည်းငယ်၊ တီထွင်ကြံဆမှုနှင့်ဆေးသုတ်မှုအနည်းငယ်ဖြင့်သင်သည်ဤလှပသောလက်မှုပညာကိုရရှိလိမ့်မည်။
ကတ်ထူပြား၊ ဆေးနှင့်သိုးမွှေးစသည့်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများဖြင့်ဤချစ်စရာမင်းသမီးလေးများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ သူတို့နှစ်သက်မြတ်နိုးကြသောကြောင့်သင်နှစ်သက်မည်။
ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ဖို့လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းနွေ ဦး သစ်ပင်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့ဟာနွေ ဦး ရာသီပန်းတစ်ပွင့်၊
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီလက်မှုပညာမှာငါတို့ကြက်ဥပုံးတွေနဲ့ဒီချစ်စရာအနီရောင်မှိုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ဒါဟာ ...
ကြက်ဥပုံးလက်မှုပညာ ၅ မျိုး
ကျနော်တို့မှာပွဲတော်မျက်နှာဖုံးလုပ်တဲ့နည်းတစ်မျိုးမျိုးလုပ်ထားတယ်။ သင်ဘယ်လောက်မြန်မြန်၊ မူလနှင့်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်ကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
ကတ်ထူပြားပြွန်များမှတဆင့်လှပသောရင်သွေးငယ်များကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတ်ဆေးများနှင့်ဘောပင်များသိုလှောင်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ခရစ်စမတ် reindeer အဆင်တန်ဆာ
သိုးမွှေး pomoms နှင့်ကတ်ထူပြားအနည်းငယ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောဤရယ်စရာဟင်းဂိုးများမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။ သူတို့ကကလေးတွေအတွက်အရမ်းရယ်စရာကောင်းပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုလည်းဖြစ်တယ်
ဤကတ်ထူပြားသည်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးသင်မမှတ်မိနိုင်ပါ။ ကလေးတွေကချစ်ကြလိမ့်မယ် ...
သင်သည်သင်၏ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ရန်ကိုချစ်လိမ့်မည်ဟုဤပျော်စရာပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့, သူတို့ကကြီးစွာသောအချိန်ပါလိမ့်မယ်!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့ဟာကြက်ဥခွက်နဲ့ကတ်ထူပြားနဲ့လွယ်ကူတဲ့ငါးတစ်ကောင်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ ပြီးပြည့်စုံတယ်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ပုံသဏ္inာန်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲ။ ဟုတ်လား
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာသင်ကတ်ထူပြားကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်လုပ်နိုင်တဲ့လက်မှုပညာ ၅ ခုကိုသင်ပေးသွားမှာပါ။
အကယ်၍ သင်၏စာမျက်နှာများကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အမှတ်အသားပြုခြင်းကိုကြိုက်လျှင်၊ သင်၏စာအုပ်များအတွက်ပျော်စရာပုံသဏ္haveာန်ရှိသည်
ဤလက်မှုပညာဖြင့်သင့်ခွေးကလေး၏မျက်နှာနှင့်သင်၏မှတ်စုစာအုပ်အတွက်အဖုံးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ Pop-up အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုဖန်တီးဝံ့ပါ။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်ယာဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက္ကူလိပ်များမှမှန်ဘီလူးကိုပြုလုပ်ရန် ...
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! နောက်ထပ်တစ်ရက်ကျရင်မင်းတို့ကိုပြန်လည်အသုံးပြုရေးယာဉ်တစ်စီးယူဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအလှဆင်ပန်းပွင့်စေပုံကိုကြည့်ကြရအောင် ...
ကွာပေးရ6ပြီးပြည့်စုံသော bookmarks
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာသင့်ကိုအိမ်မှာပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအမှတ်အသား ၆ ခုစုစည်းထားပါတယ်။
ကဒ်ထူပြားပြွန်များထဲမှအလွန်နဂိုမူလအာကာသဒုံးပျံ ၂ ခုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အချိန်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုပါ။ သငျသညျကလေးများနှင့်အတူလုပျနိုငျတဲ့ယာဉ်။
ဤသည်ကိုသင်အိမ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးလက်ပစ္စည်းများနှင့်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဲဒါလှောင်အိမ်ပဲ ...
ကလေးများအတွက်ဒီလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စားပွဲနှင့်အတူအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်နှင့်ပျော်စရာကောင်းသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်သင့်ကလေးများကိုသေးငယ်သောအလုပ်များကိုလိုက်နာစေနိုင်သည်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ခေတ်လက်မှုပညာမှာငါတို့ဟာကြက်ဥပုံးတွေနဲ့ပန်းအချို့လုပ်ကြမယ်။ ဒါဟာလက်မှုပညာတစ်ခု ...
Eva ရော်ဘာသို့မဟုတ်ကတ်ထူပြားနှင့်အတူမှော် Wand
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီမှော်လှံတံကိုအီဗာရော်ဘာနဲ့ပြုလုပ်ပေးပြီးအကောင်းဆုံးကတော့ ...
တစ် ဦး ယာဉ်နှင့်အတူကွဲပြားခြင်းနားလည်ပါ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ဒီကွဲပြားမှုကိုနားလည်ဖို့ဒီအသုံးဝင်တဲ့ယာဉ်ကိုလုပ်တော့မယ်။ ဒါကလည်းကူညီလိမ့်မယ်။
သင်ဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်များကိုဖိနပ်သေတ္တာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပါသလား။ ကောင်းပြီ, ဒီယာဉ်၏အဆိုပြုချက်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်, ပျော်စရာလမ်းအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုလေ့လာပါ
ကလေးများလုပ်သောဤလက်မှုပညာကိုမမေ့ပါနှင့်။ အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်ရယ်စရာကတ်ထူပြားအချို့ကိုဖန်တီးမည်။
ကြက်ဥ # quédateencasaကိုကြက်မကကာကွယ်ပေးတယ်
သကြားလုံးသိုလှောင်ရန်ပျော်စရာလက်မှုပညာ ၂ ခုပြုလုပ်နည်းကိုလေ့လာပါ။ ကြက်တစ်ကောင်ပုံသဏ္inာန်ရှိသောကတ်ထူပြားပြွန်ပါသောအိတ်တစ်လုံးနှင့်သေတ္တာတစ်လုံး။
လက်သည်းပန်းချီကားသည်အမြဲတမ်းပျော်စရာကောင်းသည်။ သတိရ, # အိမ်မှာနေဖို့
Pop Up ကဒ်တစ်ခုလုပ်နည်း
Pop Pop ကဒ်ပြားကိုမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာလိုပါကဤကတ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောနည်းဖြင့်ပေးရမည့်ဤမူလနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါကကတ်ထူပြားကိုအလှဆင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ acrylic ဆေးသုတ်နှင့်အတူအလှဆင်နှင့် decoupage သုံးပါလိမ့်မယ်။
အိမ်၏အဝင်ဝတွင်များသောအားဖြင့်ကြည့်။ မရသောလျှပ်စစ်မီတာများရှိသည်။ ကျနော်တို့ကဖြေရှင်းရန်အလင်းမီတာအဖုံးလုပ်မယ့်နေကြသည်
Pringles တစ်ပုလင်းထဲမှ kaleidoscope တစ်ခုပြုလုပ်ပါ
Pringles ၏ပြွန်တစ်ခုနှင့်သင်လက်တွင်ရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ kaleidoscope ပြုလုပ်ရန်ဝံ့ပါ။ ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ဖို့လွယ်ကူခြင်းနှင့်မူရင်း။
ဒီအားလပ်ရက်ကလေးများနှင့်အတူလုပ်မယ့် box တစ်ခု။ သူတို့၏ဘဏ္keepာများကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ အလွန်လွယ်ကူပြီးစျေးပေါသောပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဒီမြွေတွေကိုလုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်၊ ပြီးတော့ကလေးတွေကရလဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ သင်လုပ်ချင်သမျှလုပ်နိုင်သည်။ သင့်မှာပစ္စည်းရှိပြီးသားလား။
ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကစားစရာတွေဖန်တီးရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ အခုသူတို့ချစ်ကြတဲ့ပတ်ပတ်လည်လည်ပတ်မှုကိုလုပ်နိုင်ပြီ။ အရမ်းလွယ်ပြီးပျော်ဖို့ကောင်းတယ်
Polaroid ဓာတ်ပုံများအတွက် Pole Stick များပါသောဓာတ်ပုံ Frame
Popsicle တုတ်နှင့်အတူဤ DIY Polaroid ဓာတ်ပုံ Frame ကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။ သူတို့သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးလှပသောပုံပေါက်နေသည်!
ကတ်ထူပြားများနှင့်ကတ်ထူပြားများဖြင့်ဓာတ်ပုံဘောင်တစ်ခုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ အိမ်တွင်တွေ့ရသောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများပါ ၀ င်ပြီးမြန်ဆန်သည်။
KAWAII ရေခဲမုန့်မှတ်စု - ပုံအဆင့်ဆင့်
ဒီသင်ခန်းစာမှာ kawaii ရေခဲမုန့်လိုမှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြမယ်။ ၎င်းသည်အခြေခံကျသောလက်မှုပစ္စည်းပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကလေးအားပေးရခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်နေပါ၊ သင်ယခုလိုအပ်တာတွေကိုသင်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်တစ်ဆင့်ချင်းစီကိုငါပြသပါ။
ကတ်ထူပြွန်များကိုပြန်လည် အသုံးပြု၍ ခရစ္စမတ်အလှဆင်ခြင်းအတွက်အကြံဥာဏ် ၃
ဟယ်လိုဝင်းအတွက်ကြောင်အနက်ရောင်ပုံဖော်ပုံ၊ ပျော်စရာ၊ လက်တွေ့ကျပုံကိုနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုအလှဆင်ရန်သို့မဟုတ်ကစားရန်သုံးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းနှင့်အတူ eva ရာဘာငှက်လုပ်နည်း
သင်၏အခန်း (သို့) စားပွဲခုံကိုအလှဆင်ရန်ကတ်ထူပြားများ
သင်၏အခန်း (သို့) သင့်အိမ်၏ထောင့်တစ်နေရာကိုအလှဆင်ရန်နှင့်အထူးထိတွေ့စေရန်ဤကတ်ထူပြားအက္ခရာများကိုမည်သို့စုံလင်အောင်ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
photocall အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအဆင့်သုံးဆင့်နဲ့ပြပြီးပြီ။ ၎င်းသည်ပါတီတစ်ခုအတွက်သေချာပေါက်ထိခိုက်သည်။
kawaii cookie ပုံသဏ္mobileာန်မိုဘိုင်းကိုင်ဆောင်ထားသူတစ်ယောက် - STEP BY STEP
ဒီသင်ခန်းစာမှာမိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်သူတစ် ဦး ကို kawaii cookie ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြတယ်။ awaရာမ kawaii cookie တစ်ခုဖြင့်အလှဆင်နေစဉ်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုငြိမ်ငြိမ်လေးရပ်ထားလိုက်သည်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာ tic-tac-toe အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုအတွက် tiles ပါတဲ့ဘုတ်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ။
သင်၏အိမ်ကိုမူလထိတွေ့မှုဖြင့်ဖြည့်ပေးမည့်ဤ retro retro frame ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
နို့ပုံးနှင့်လုပ်သော Birdhouses ။
နို့သေတ္တာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Birdhouses၊ ပြန်လည်အသုံးပြုရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်ဘာမျှမက ပုံးများမှပြုလုပ်ထားသော birdhouses ကိုကလေးများသည်ချစ်ကြလိမ့်မည်။
မူရင်းလက်ဆောင် tags များ
လက်ဆောင်များနှင့်အတူရိုးရှင်းသော kawaii စတိုင်တံဆိပ်များပြုလုပ်နည်းကို DIY ပြုလုပ်ပါ။
ခရစ္စမတ်ဖတ်များအတွက် Bookmark ကို
စာအုပ်ကိုအလှဆင်ဖို့ DIY ကို item ။ ဤဆောင်းပါး၌စာဖတ်သူကိုအထူးရည်ညွှန်းထားသောကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားပြုရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပြသထားသည်။
Santa Claus လက်သုတ်ပဝါကိုင်ဆောင်သူ
ဒီဆောင်းပါးမှာစက္ကူလိပ်တစ်လုံးပါတဲ့လှပသော Santa Claus လက်သုတ်ပဝါကိုင်သူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။ ခရစ်စမတ်ညစာအတွက်ခရစ်စမတ်အကြောင်းရင်း။
Matchbox နှင့်အတူ Little ကခရစ်စမတ်အိန်ဂျယ်
ဤဆောင်းပါး၌ရိုးရှင်းသောပွဲစဉ်သေတ္တာနှင့်အတူသစ်ပင်အတွက် (သို့) မွေးကင်းစမြင်ကွင်းအတွက်ပျော်စရာခရစ်စမတ်ကောင်းကင်တမန်လေးတစ်ကောင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကတ်ထူပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနှင့် ၀ ါရှတိပ်ဖြင့်အလှဆင်ထားသောကလေးများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားသည့်မှန်ဘီလူးကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
DIY: ကြောင်ခြစ်ရာ post
ငါတို့လည်ပင်းကိုစီးပွားရေးနှင့်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်တွင်မည်သို့ပြသမည်ကိုပြသော DIY ။
ပထမဆုံးရတနာများကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်ရောင်စုံ motif များပါ ၀ င်သည့်ကတ်ထူပြားလက်ဝတ်ရတနာ
လက်ဆောင်သေတ္တာတစ်ခုလုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ DIY ဆောင်းပါး။ ခရစ်စမတ်၊ မွေးနေ့များသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အခမ်းအနားမျိုးအတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးသောစိတ်ကူး။
ဤဆောင်းပါး၌ 'Puss in Boots' ၏ကလေးပုံပြင်၏ခမ်းနားသောရုပ်သေးရုပ်ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုဖော်ပြပါမည်။ ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုပြဇာတ်ရုံနဲ့စာဖတ်တာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းရဲ့ဖိနပ်တွေအားလုံးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖိနပ်ထိန်ထိန်ကွင်းတစ်ခုမှာဘယ်လိုစုစည်းရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။ DIY သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာကတ်ထူပြားကတ်ပြားတွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂီတကသူ့ဂစ်တာထဲမှထွက်လာသည်ဟုဟန်ဆောင်။ ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း - ကြက်သေတ္တာများဖြင့် Ladybugs
ယနေ့ Crafts ၌ငါတို့ပြန်လည်အသုံးပြုကစားစရာလုပ်မယ့်နေကြသည်။ ဒီအတွက်ငါတို့ကြက်ဥပုံးကိုသုံးပါမယ်။